Tilmaamaha Twitter ee Wax ku oolka ah Suuqgeynta Twitter
Maxaad Ka Baran Kartaa Twitter-ka Tweets
Arbacada, Juun 23, 2010 Axad, Oktoobar 19, 2014 Adam Yar
Soo bandhigiddan ayaa in ka badan 24,000 oo aragti ah ka qabatay Slideshare waxayna haysaa macluumaad aad u tiro badan… dhammaantoodna waxaa lagu soo koobay gabal gaballo ka kooban 140 xaraf ama wax ka yar. Xitaa waxaad ka heli doontaa xoogaa qorayaasha ah Martech Zone gudaha, sidoo kale!
Kala duwanaanta iyo hodantinimada tilmaamahan ayaa markhaati dhab ah u ah awoodda Twitter-ka oo ah dhexdhexaad warbaahineed. Ha dhayalsan awooda qalabkaan. Waa tan soojeedinta - 140 Talooyin Twitter:
Haddii aad raadineyso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida Suuqgeynta Twitter ay uga caawin karto ganacsigaaga, soo qaado nuqul ka mid ah Suuqgeynta Twitter-ka ee Dadweynaha. Sida taxanaha Dummies oo dhan, buuggu wuxuu daboolayaa farsamooyinka bilowga ah iyo kuwa horumarsan ee si wax ku ool ah uga faa'iideysanaya Twitter-ka sidii dhexdhexaad.
PS: Kyle dhab ahaan ma uusan qorin boostadan, Doug ayaa qoray. Kyle waa nin mashquul badan laakiin Doug wuxuu rabay inuu hubiyo inuu helo dareenka uu uqalmo soo bandhigid weyn iyo buug cajiib ah.
Tags: kyle lacyTwittertalooyinka twitter
Xitaa Faa’iidooyinka waxay ku noqdaan Xerada Tababarka
Jun 24, 2010 saacadu markay ahayd 6:09 AM
Waad ku mahadsan tahay qaylada! Runtii waan ku qanacsanahay.
Jun 24, 2010 saacadu markay ahayd 7:08 AM
Waxaan xasuustaa markii aad codsatay talooyinkan sanadkii hore. In kastoo qaar badan oo ka mid ahi runta hayaan, waxaan u maleynayaa inaad heli doontid tiro cusub oo talooyin ah sannadkan.
Jun 30, 2010 saacadu markay ahayd 3:54 AM
Waxaan helay dad badan oo xiiso leh oo cusub waxaan u baahanahay inaan raaco